Anosy : Nisy nitoraka « grenade », zaza iray maty, olona 45 naratra – Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2014 → janvier → 27 → Anosy : Nisy nitoraka « grenade », zaza iray maty, olona 45 naratra
Anosy : Nisy nitoraka « grenade », zaza iray maty, olona 45 naratra
Redaction Midi Madagasikara 27 janvier 2014 Anosy, nitoraka grenade, olona naratra, zaza maty
Teto amin’ity toerana ity no nisy nanipy an’ilay “grenade”
Mafy dia mafy ny fipoahana, re tany amin’ny manodidina lavitra izany ary nanaitra ny maro
Nirefotra ny “grenade” ny harivan’ny sabotsy lasa teo tetsy Anosy, eo amin’ilay sampanana hivily ho any Mahamasina. Toerana fiantsonan’ny taxi-be eo ary feno mpivarotra amoron-dalana. Vokatr’izany, zaza iray vao roa taona mahery kely no namoy ny ainy teo no ho eo, olona miisa 45 kosa no fantatra fa naratra ka ny 15 no tena voa mafy, araka ny vaovao voaray teo anivaon’ny hopitaly nitondrana azy ireo. Anisan’izany ny vehivavy iray eo amin’ny 18 taona izay tapaka tongotra.
Mbola tena marobe ny olona tamin’io ora voalaza etsy ambony io, ao ireo niandry taxi-be handeha hody, ao koa ireo mpivarotra izay mbola nameno ny sisin-dalana. Maro ny resaka re teny an-toerana ny amin’ny fiavian’ilay “grenade offensive” nisy nanipy teny. Samy manana ny filazany ny rehetra. Ny maro mpilaza dia ny hoe, tsy lavitra vehivavy iray nivarotra lasopy niaraka tamin’ny zanany kely roa no niantefa ilay zavatra nipoaka. Nirefotra mafy tokoa ilay izy ary tamin’izany no nahafaty ilay zazalahy kely. Ny zokiny sy ilay reniny kosa samy maratra mafy avokoa ary mbola tsaboina eny amin’ny hopitaly. Fa tsy lavitra teo ihany koa no nisy an’ilay vehivavy tapaka tongotra. Samy nikoropaka nitondra ireo olona maratra ny rehetra. Hadino teo amin’ilay toerana anefa ny tongotra tapataka an’ilay vehivavy. Fotoana elaela taty aoriana vao nisy naka teo nentina tany amin’ny trano fitsaboana. Ao amin’ny “réanimation chirurgicale » no misy io olona io amin’izao fotoana izao miaraka amina olona roa hafa.
Ho an’ireo 45 naiditra hopitaly moa, afaka nandeha nody ny 27 rehefa nahazo ny fitsaboana sahaza azy ireo. Ny hafa kosa dia mbola eny avokoa ka ny 8 ao amin’ny « traumatologie », ny 4 ao amin’ny « réa-urgences », ny 2 ao amin’ny « neurochirurgie », iray ao amin’ny « chirurgie thoracique » ary ny telo ambiny ao amin’ny « réa chirurgie ». Omaly moa dia tonga teny amin’ny hopitaly nampahery an’ireo niharam-boina sy nidonam-pahoriana ny prezida Hery Rajaonarimampianina.
Ny sabotsy hariva, vao nipoaka ilay « grenade », dia tonga marobe teny an-toerana ny mpitandro filaminana. Ny olona mbola samy nisahotaka ary teo ihany koa ireo mpanao gazety marobe. Tamin’izany no nahitana ny potik’ilay zavatra niparitaka nanodidina teo. Heverina fa avy amin’izany no tsy maintsy ahalalana ny fiavian’ity “grenade” ity. Re manerana ny toerana maro manodidina an’Anosy ny fipoakan’ilay izy. Dia nisy ny olona nihevitra fa misy afomanga ao Anosy tohin’ny lanonana nametrahana ny prezida vaovao teny Mahamasina. Indray mandeha ihany anefa ilay fipoahana ka teo vao samy gaga.
Ny mpitandro filaminana ao amin’ny “brigade des recherché” no misahana ny fanadihadiana amin’ity asa ratsy ity.